Uluhlu lwesoftware esetyenziswa kwimvakalelo ekude-Geofumed
Ikhaya/ArcGIS-ESRI/Uluhlu lwesoftware esetyenziswa kwimvakalelo ekude
ArcGIS-ESRIIiphotographyGeospatial - GISqgis
Kukho intaphane yezixhobo zokusetyenzwa kwedatha efunyenwe ngovamkelo olude. Ukusuka kwimifanekiso yesathelayithi ukuya kwidatha ye-LIDAR, nangona kunjalo, eli nqaku liza kubonisa ezinye zesoftware ebaluleke kakhulu yokuphatha olu hlobo lwedatha. Ngaphambi kokuqala ngesoftware, kufuneka kuqatshelwe ukuba kukho iindidi ezahlukeneyo zedatha ngokwendlela yazo yokufumana, nokuba kungesathelayithi ezisebenzayo/ezingenamsebenzi okanye ii-UAV.
Isoftware yokwenziwa kwedatha yoluvo olusebenzayo/esebenzayo
QGIS: I-Quantum GIS yindawo evulekileyo yomthombo we-GIS, kwiminyaka edlulileyo yongeze iindidi ezininzi zemisebenzi kunye nokuhambelana ukwenzela ukuba umhlalutyi abe nethuba lokucubungula kunye nokufumana iintlobo ezahlukeneyo zeemveliso. Into enomdla malunga neli qonga linokuthi liqwalaselwe ngumsebenzisi, ngaphezu kwe-interface ye-GIS eyisiseko, kukho iiplagi ezininzi ezihambelana nemisebenzi yomhlalutyi.
Esinye sezixhobo ezinokusetyenziswa yi Orpheus Toolbox, equlethe i-geoalgorithms eluncedo kakhulu xa ukhupha idatha kumfanekiso wesathelayithi, ingaba yi-multispectral okanye i-radar. Eminye yemisebenzi onokuyifumana yile: Ulungelelwaniso lweRadiometric, inkxaso yeemodeli zomphakamo wedijithali, ibhendi yealjebra, ukuhluza, izalathisi zeradiometric, ulwahlulo, ulwahlulo, utshintsho lobhaqo.
Ungongeza kwakhona i Iplagin yoHlelo lweSemiautomatic, apho ezinye iintlobo zezixhobo ezinikezelwe kumfanekiso wangaphambili zinikezelwe, njengokutshintsha ukusuka kwinombolo yedijithali ukuya kwimbonakalo. Idata yenxenye enkulu yabenzi boluvo abasebenzayo ngoku sele ilayishiwe. Ngokuphathelele idatha ye-lidar, kwi-Qgis 3 inokwenzeka ukuba ibonakale ngesixhobo se-LAStools.
I-ArcGIS: Enye yesoftware epheleleyo yokulawula idatha ye-geospatial. Banoluhlu olubanzi lwemisebenzi ngaphakathi nangaphandle kweqonga ukufezekisa ukuhlanganiswa kwedatha yangempela. Kukhupho lwayo lwamva nje lwe-ArcGIS, izixhobo ezingakumbi zokulawula idatha yesathelayithi -imagery- zongezwa. Ikwanazo nezinye iiplagi ezinje nge "Drone2map" enikwe amandla yiPix4D ukwenza i-2D, iimveliso ze-3D ezivela kwidatha yedrone kunye ne-ESRI SiteScan, eyenzelwe imephu yedrone esekwe kwilifu, inxalenye ye-ecosystem ye-ArcGIS, apho imifanekiso icutshungulwa. RGB.
Izisombululo zika-Esri zokusetyenzwa kolwazi lwe-geospatial zihlala zigqibelele kwaye ziyimpumelelo, yiyo loo nto ithathwa njengenkokeli kushishino lwe-geotechnologies.
Sopi: I-SoPI (Isoftware yokuLungiselela iMifanekiso) sisoftware ephuhliswe yiCONAE (iKomishoni yeSizwe yeMisebenzi yase-Argentina). Ngale nto kunokwenzeka ukuba ubone, usebenze kwaye uhlalutye idatha yesathelayithi; isimahla kwaye ujongano lwayo kulula ukuyifaka / ukuyilawula. Indawo yayo yi-2D/3D kwaye yakhiwe phantsi koyilo lweNkqubo yoLwazi lweJografi.
I-ERDAS: Yisoftware ekhethekileyo ekusetyenzweni kwedatha ye-geospatial, enikwa amandla yi-Hexagon Geospatial. idibanisa izixhobo ze-GIS, i-photogrammetry, inkxaso kunye nohlalutyo lwemifanekiso ye-optical-multispectral kunye ne-hyperspectral-, i-radar kunye ne-LIDAR. Ngoku unokufikelela kwi-2D, i-3D kunye neembono zemephu (ukubonisa i-cartographic elula). Idibanisa izixhobo ezinje: umlinganiselo, ulawulo lwedatha yevector, ukusetyenziswa kwedatha yeGoogle Earth, ukubonwa kwemethadatha.
I-Erdas ibonakaliswe ngokuba liqonga eliphezulu elichanekileyo elivumela umhlalutyi ukuba abe nemveliso ngakumbi ngokuqhutywa komsebenzi wabo. Ukuphathwa kwale software kufuna ulwazi oluncinci kwimvakalelo ekude, nangona kunjalo, akunzima ukufunda. I-suite yenziwe ngeendidi ezimbini zelayisensi: Yiba nomfanekiso-ngqondweni wezinto ezibalulekileyo, kwinqanaba elisisiseko, kwaye UFIKE I-Advantage kubasebenzisi abakhethekileyo.
NDITHUMELE: I-Envi yenye isoftware ekhethekileyo yokusetyenzwa kwedatha ekude. Isekelwe kwi-IDL (uLwimi lweDatha oluSebenzayo), olubonelela ngokucokisekileyo komfanekiso, ukwenziwa kwezinto ngokwezifiso kunye nemisebenzi yamava omsebenzisi.
I-suite inika ukuhamba komsebenzi okunokuthi kudityaniswe namanye amaqonga afana ne-ESRI's ArcGIS. Le software isekela zonke iintlobo zemifanekiso, zombini ukusuka kwi-airborne sensors kunye ne-satellites (i-multispectral, i-hyperspectral, i-LIDAR, i-thermal, i-radar kunye neminye imifanekiso) Ixhasa ukuhanjiswa okukhulu kweeseti zedatha, kubandakanywa ukubonakaliswa kwedatha ye-3D, ukuphononongwa kweesignesha ze-spectral phakathi kwabanye. I-suite ye-ENVI ibandakanya: i-ENVI, i-ENVI ye-ArcGIS, i-ENVI EX, kunye ne-SARScape.
I-PCI Geomatics: I-PCI Geomatics, yaphuhliswa ukubonwa, ukulungiswa, ukusetyenzwa kwemifanekiso evela kwi-optical sensors, ukufota emoyeni, i-radar okanye i-drones. Ndiyabulela kwi-teknoloji ye-GDB (i-Generic Database), iyahambelana ubuncinane neentlobo ze-200 zeefomathi, ngoko ke, inamandla okuphatha umthamo omkhulu wedatha egcinwe kwiinkcukacha ezifana ne-Oracle.
Ineemodyuli ezikhethekileyo zokusetyenzwa kolwazi. Umzekelo, nge-Orthoengine, unokwenza uhlengahlengiso oluzenzekelayo, iimosaics, kunye nokuveliswa kwemodeli yokuphakama kwedijithali.
SNAP: I-SNAP (Sentinel Application Platform) yisoftware ye-ESA, eyenzelwe ukubonwa, ukusetyenzwa kwangaphambili nasemva kweemveliso zeqonga le-Sentinel, nangona ivuma ukubonwa kwemifanekiso evela kwezinye iisathelayithi.
Inkqubo yahlulahlulwe yangamacandelo okanye iibhokisi zezixhobo ngokuxhomekeke kwimodeli yesathelayithi. Ibhokisi yesixhobo nganye ifakwe ngokwahlukeneyo (I-Sentinel-1, I-Sentinel-2, I-Sentinel-3, I-SMOS kunye ne-PROBA-V) kwaye ikwaxhasa ukuba kunokwenzeka ukuqwalasela inkqubo yokusebenza kunye nePython (SNAPISTA). Igqibelele kakhulu, onokuthi ngayo udibanise idatha yevektha efana neefayile zemilo kunye nolwazi oluvela kwiinkonzo zeWMS. Idibanisa ngokuthe ngqo kwi I-Copernicus Open Access Hub ukufikelela kwiimveliso zeSentinel ngokuthe ngqo.
gvSIG: Le software esebenzisanayo yasimahla ethe kwiminyaka edlulileyo iphucule intsebenziswano phakathi komsebenzisi kunye nenkqubo. Ibonelela ngemisebenzi yolawulo lwebhendi, inkcazo ye-ROI's, izihluzi, ukuhlelwa, ukudibanisa, i-mosaics, ukuguqulwa kwe-multispectral, ukulinganisa amaxabiso okubonakaliswa, ukuveliswa kwesalathisi, imithi yesigqibo okanye i-mosaics ngolwandiso olufakwe kwinkqubo. Ukongeza, iqulethe inkxaso yedatha ye-lidar kwifomathi. I-LAS, kunye ne-DielmoOpenLidar (isoftware yasimahla enelayisensi ye-GNU GPL esekwe kwi-gvSIG), yokwenziwa kweeprofayili, ulawulo lomgangatho kunye nolawulo lwamafu.
I-SAGA: Inkqubo yoHlahlo lweGeoscientific oluzenzekelayo yinkqubo yomthombo ovulekileyo, nangona ibunjwe njenge-GIS, ine-algorithms yokucubungula imifanekiso yesathelayithi kuba iza nelayibrari ye-GDAL. Ngayo, iimveliso ezinje ngezalathiso zezityalo, ukudityaniswa, ukubonwa kwezibalo, kunye novavanyo lwesigqubuthelo samafu kwindawo inokuveliswa.
Injini yoMhlaba kaGoogle: Nge-Google Earth Engine, umhlalutyi unokujonga ngeso lengqondo idatha ye-geospatial, yonke kwi-architecture ephuhliswe efini. Igcina inani elikhulu lemifanekiso yesathelayithi kwaye ngale nto inokuboniswa ngendlela yexeshana kwinguqu yomphezulu kuba ibandakanya imifanekiso yembali.
Isoftware ye-LIDAR kunye neDrone data processing
I-Pix4Dmapper: Yisoftware egxile kwindawo yefotogrammetric, ejolise ekunikeni izisombululo kwiiprojekthi ezichanekileyo. Ngezixhobo zayo, unokulawula iingqimba zamafu, iimodeli zokuphakama, i-3D meshes ukusuka kwidatha yokuva okude, kwaye wenze i-orthomosaics.
Inemisebenzi eyimpumelelo kakhulu ngexesha lokucwangciswa kwedatha yangaphambili nasemva. Isetyenziswa kakhulu kulimo oluchanekileyo, ivelisa iimephu zocando lwemida ukuchonga iindawo ezinemveliso. Yamkela ezi ntlobo zilandelayo zeemveliso logama nje zikwi-.JPG okanye .ifomathi ye-TIF: Imifanekiso ye-RGB, imifanekiso yedrone, i-multispectral, i-thermal, imifanekiso yekhamera ye-360º, iividiyo okanye ukubeka imifanekiso yekhamera.
IMapper Global: Sisixhobo esifikelelekayo esidibanisa izixhobo ezilungileyo zokuphatha idatha yendawo, ekubeni ixhasa iintlobo ezahlukeneyo zeefomathi, kwaye inikezela ngokufikelela ngokuthe ngqo kwiikhathalogu ezahlukeneyo zemifanekiso ephezulu efana ne-DigitalGlobe. Ukuba ufuna ukucubungula idatha yohlobo lwe-LIDAR, ungayongeza ngokuthe ngqo kwi-LAS kunye ne-LASzip ifomathi, kwinguqulo yayo yamva nje isantya sokunikezela siphuculwe ukubonelela ngamava angcono omsebenzisi.
DroneDeploy: NjengoPropeller, iDrone Deploy yinkqubo yendawo yefotogrammetry, ibandakanya yonke into ukusuka kwinqanaba lokuqala lenkqubo yokubamba ukufumana imodeli ye-3D. Ngale nto inokwenzeka: ukulawula ukuhamba kwe-UAV (ngokukodwa i-DJI drones), inezixhobo zokulinganisa ezifana nommandla kunye nomthamo. Inokufumaneka simahla kunye nemida okanye inguqulelo epheleleyo efuna umrhumo welayisensi. Kuluncedo kakhulu xa ufuna ukuqinisekisa ukubalwa kweentlobo zezityalo, iindawo zezityalo kwimeko yokuqala okanye yokugqibela, ukongeza ekujongeni iimephu ze-multispectral kunye ne-infrared ngaphakathi kweDroneDeploy.
DroneMapper sisoftware ebonelela ngeenzuzo zeGIS, kwiqonga lokusebenzisa imifanekiso yefotogrammetric. Ineenguqulelo ezimbini ngokweemfuno zomhlalutyi, enye isimahla kwaye enye ihlawulwe ngaphezulu kwe-160 € ngonyaka. Yenye yesoftware engasekelwanga kwilifu lokusetyenzwa kwedatha, kodwa kunoko zonke iinkqubo zenziwa ekuhlaleni. Oku kuthetha ukuba ikhomputha kufuneka ihlangabezane neempawu ezithile zememori ukuze igcine kwaye iqhube iinkqubo ngokufanelekileyo. NgeDroneMapper unokuvelisa iiModeli zoMphakamo weDijithali kunye ne-Orthomosaics kwiFomathi yeGeotiff.
I-Agisoft Metashape: Nge-Agisoft Metashape, eyayifudula ibizwa ngokuba yi-Agisoft Photoscan, umsebenzisi unethuba lokusebenzisa imifanekiso, amafu alathe, enze imifuziselo yokuphakama, okanye imifuziselo yomhlaba wedijithali ngokuchaneka okukhulu kokusetyenziswa kwizicelo zeGIS. Ujongano lwayo kulula ukuyisebenzisa kwaye inolwakhiwo lwedatha kwilifu kubasebenzisi abaqeqeshiweyo beMetashape. Yinkqubo efuna ilayisenisi, umgangatho ungaphezulu kwe-170 yeedola kwaye iPorofessional ingaphezulu kwe-3000 yeedola. Ukutya kuluntu lwe-Agisoft ukuphucula i-algorithms apho idatha iqhutywe ngayo.
cadastre ESRI GIS Umhlaba ka-Google QGIS
Imizobo yeminyaka engama-60 eyadlulayo